उपभोक्ता मेरो पक्षमा छन् - Loktantra Post Loktantra Post
उपभोक्ता मेरो पक्षमा छन्
Published On : 23 January, 2019 9:05 am
On : कुराकानी
मेचीनगर–११ र १२ मा अवस्थित कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्वाचन आगामी शनिबार हुँदैछ । समूहको आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पटक–पटक प्रयास भए । तर, सर्वसम्मतको प्रयास विफल भएपछि उम्मेद्वारहरु दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
प्रगतीशिल प्यानलबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी योगराज भट्टराई (योगेश) र लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी ज्ञानु तामाङ (वीरबहादुर) छन् । निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर लोकतन्त्र पोस्टकर्मी विमर्श उप्रेती र प्रकाश पौडेलले गरेको कुराकानी ः
लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार
ज्ञानु तामाङ (वीरबहादुर)
अध्यक्ष पदमा तपार्ईंको उम्मेद्वारी किन ?
–यो मेरो पहिलो उम्मेद्वारी होइन । यसअघि पनि म अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार थिएँ । उपभोक्ताबाट सम्मानजनक मत पनि पाएकै हुँ । समूहका उपभोक्ताले नरुचाएका होइनन् । तर, म उपविजेता बन्न पुगेँ । विजेता बन्न केही मत पुगेन । परिस्थिति अहिले अर्कै छ । विगतको कार्यसमितिले गर्न नसकेका अधुरा काम पूरा गर्न, समूहको मुहार फेर्न, त्यहाँ भित्रका आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधि अन्त्य गरी उपभोक्ताको हितमा काम गर्नकै लागि मेरो उम्मेद्वारी अनिवार्य ठानेको हुँ ।
तपाईंंका चुनावी एजेण्डा चाहिँ के–के छन् ?
–हामी अहिले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको एजेण्डासहित उपभोक्ता भेटघाटमा छौँ । हाम्रा एजेण्डा समूह र आम उपभोक्ताको हितमा छन् । वनको आर्थिक अनियमितता बारे उपभोक्ता छर्लङ्ग छ । कार्यसम्पादन शैली फितलो छ । अनियमिततालाई पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नु मेरो पहिलो एजेण्डा हो । मेचीनगर–११ को डिपु डाँडामा मलामी टहरा बनाउँछौँ । त्यसका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्छौँ । उपभोक्ता परिचय पत्रबाट बञ्चित छन्, परिचय पत्र अनिवार्य छ, त्यसको प्रबन्ध गर्छौँ ।
चुनाव जित्ने आधार के–के छन् ?
–वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न जस्तो नीति बन्नुपथ्र्यो । त्यो अनुरुप बन्न नसक्नु दुखद छ । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु । उपभोक्ता मेरो पक्षमा छन् । वर्तमान कार्यसमितिले चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेन । निर्वाचन अघि उपभोक्ताको हित गर्ने एजेण्डा ल्याइए पनि काम सन्तोषजनक भएन । उपभोक्ता समूहमा नयाँ नेतृत्व चाहन्छन् । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमका कार्ययोजना समितिले ल्याउन नसक्दा चौतर्फी गुनासो छ । हामी उपभोक्ताको पक्षमा छौँ । त्यसकारण चुनाव जित्ने हाम्रो टिम नै हो ।
प्रतिष्पर्धीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–प्रतिष्पर्धीलाई मैले इगोको रुपमा लिएको छुइन । यसअघिको चुनावमा पनि योगेशजीसँगै मैले उम्मेद्वारी दिएको थिएँ । त्यो बेला म उपविजेता भएँ । तर, मलाई पश्चाताप छैन । चुनाव अङ्क गणितको खेल हो । हारजीत स्वभाविक छ । म आतिन्न । समूहका राम्रा योजनालाई समर्थन छ मेरो । चुनावी माहोल अहिले मेरो पक्षमा देखिनुले पनि निर्वाचन जित्ने कुरामा दुईमत छैन । समूहको अनियमितता लगायत अन्य अपारदर्शी कामको भण्डाफोर गरी उपभोक्ताको हितमा काम गर्न पनि मेरो उम्मेद्वारी हो ।
–मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
–आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरु नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । तपाईंको एक मतले नै हार र जितका लागि निर्णायक भूमिका खेल्छ । त्यसैले विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । मलाई पहिला पनि सम्मानजनक मत दिनुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु । यसपटक हाम्रो प्यानललाई विजय गराइदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
पहिलो कुरा त उपभोक्ताबाट प्राप्त हुने मत पार्टीलाई नभई उम्मेद्वारलाई हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । म पनि कुनै पार्टी विशेषबाट उम्मेद्वार छु । तर पनि म आम उपभोक्ताको साझा मान्छे हुँ । सर्वसम्मत हुन नसकेपछि प्यानल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । त्यसैले एउटा प्यानलमा म पनि परेँ । तर, वनको नेतृत्वमा पुगेपछि म पार्टीको होइन, उपभोक्ताको मान्छे हुन्छु र हुनुपर्छ पनि । त्यसैले आम मतदाताले लोकतान्त्रिक समूहलाई अत्यधिक बहुमत दिई विजयी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
‘मान्छे तान्ने प्रथा’ अब हटाइने
काँकरभिट्टा । ‘हेल्लो भइया काहाँ जाएङ्गे, यता आइए, धरान, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमान्डुका बस इधर मिलेगा ।’ यी
जसमायालाई सुन्नेहरु भन्थे–‘एकदिन पक्कै मन्त्री बन्छिन्’
।। गणेश लम्साल ।। झापा । इलामको फाकफोकथुममा जन्मिएकी जसमाया गजमेरले दुर्गम ठाउँमा गरिब परिवारले कस्तो दुःख भोग्नुपर्छ